Ulwandle Okhotsk: izici, ukuqeqeshwa kanye nomnotho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngolwandle olugeza ogwini lwamazwe aseRussia naseJapan. Imayelana ne- Ulwandle Okhotsk. Itholakala enyakatho-ntshonalanga yePacific Ocean emaphethelweni aseNyakatho-mpumalanga ye-Asia. Kuluwulwandle olwakhiwe ngendlela enelukuluku futhi lubalulekile kwezomnotho namuhla.
Kulesi sihloko sizokutshela ngazo zonke izici, ukwakheka nokubaluleka koLwandle lwase-Okhotsk.
2 Isimo sezulu soLwandle lwase-Okhotsk
3 Isici sezomnotho soLwandle lwase-Okhotsk
Ulwandle olugeza ogwini lwamazwe aseRussia naseJapan. Indawo yayo yonke ingamakhilomitha-skwele ayizigidi eziyi-1.6 futhi itholakala enyakatho-ntshonalanga yePacific Ocean. Inemikhawulo echazwe yingxenye esenyakatho yogu lwaseSiberia, entshonalanga ngesiqhingi saseSakhalin, empumalanga ngo iNhlonhlo YaseKamchatka neziQhingi ZaseKuril. Ugu olusenyakatho yesiqhingi saseJapan iHokkaido ngumkhawulo oseningizimu walolu lwandle.
Ukwakheka kuye kwaba nelukuluku impela selokhu kwakhiwa eminyakeni eyizigidi ezimbili edlule ngenxa yeminyaka yeqhwa elandelanayo. Ukuqandisa okuqhubekayo nokuncibilika bekukhiqiza ukugeleza okwanele emifuleni yamazwekazi ukuze kugcine kugezwa le mingcele. Ulwandle lolwandle luphansi enyakatho nasentshonalanga kodwa luthola ukujula okuthe xaxa njengoba siya eningizimu. Engxenyeni engajulile sithola izilinganiso zamamitha angama-200 kuphela. Njengoba siya engxenyeni eseningizimu sithola iphuzu elijule kakhulu eliseKuril Trench. Le ndawo ejulile cishe ingamamitha angu-2.500 XNUMX.
Ulwandle Okhotsk Kugqame ngokuba nolwandlekazi olunezici eziphakeme futhi ezinamadwala. Imvamisa zifana namawa anamawala amaningi nokuphakama. Imifula emikhulu eyondlayo igelezela kulezi zingqimba, okuyi-Amur, iTugur, i-Uda, i-Okhota, iGizhiga nePenzhina. Sizokhuluma ngeyokuqala kamuva kwazise iyona ekhokhela kakhulu futhi ephethe ukwengeza amanzi amaningi olwandle.
Ngakolunye uhlangothi, emaphethelweni eziqhingi zaseHokkaido naseSakhalin izici ziphansi ngandlela thile. Amawa mancane futhi anamadwala amancane ngokubukeka. Lokhu kunquma ukuthi usawoti uphansi emanzini asogwini asenyakatho nasenyakatho-ntshonalanga. Ukuhamba kwemisinga yoLwandle lwase-Okhotsk kuphikisana nokuhamba kwewashi. Lokhu kuvame ukwenzeka njengoba itholakala enyakatho Nenkabazwe. Amanzi afudumele akhithika oLwandle lwaseJapan abheke engxenyeni esenyakatho edlula eStrait of Tartary. Le Strait iphethe ukwehlukanisa uSakhalin nezwekazi.
Lawa manzi futhi adlula eStrait of the Perouse esendaweni ephakathi kweSakhalin neHokkaido. Enye ingxenye engena oLwandle lwase-Okhotsk ngamanzi asolwandle apholile aqhamuka ePacific ngemigudu yamaKuriles.
Isimo sezulu soLwandle lwase-Okhotsk
Ake sibheke ukuthi sithini isimo sezulu salolu lwandle. Kubanda kakhulu kuyo yonke i-East Asia. Ngesikhathi sasebusika, isimo sezulu nesimo sombuso oshisayo kufana kakhulu nolwandle lwase-Arctic. Okungukuthi, kunjengokuthi ulwandle olutholakala esigxotsheni esisenyakatho. Izinga lokushisa eliphansi likhona unyaka wonke. Izifunda ezitholakala ENyakatho-mpumalanga, eNyakatho naseNtshonalanga kuba nesimo sezulu esibi ebusika. Lokhu kungenxa yethonya izwekazi lase-Asia elinalo kusimo sezulu. Kakade ezinyangeni zika-Okthoba kuya ku-Ephreli sithola amazinga okushisa aphansi kakhulu anezilinganiso ezingaphansi kwezingu-0 degrees. La mazinga okushisa aqhubeka futhi aqhubeka ngokuhamba kwesikhathi enza ulwandle lube yiqhwa.
Engxenyeni eseningizimu naseningizimu-mpumalanga inesimo sezulu sasolwandle esimnene njengoba iseduze nolwandle iPacific. Isilinganiso semvula yaminyaka yonke singama-400 mm enyakatho, ama-700 mm entshonalanga kanye nama-1.000 mm eningizimu naseningizimu-mpumalanga. Yize ingxenye esenyakatho inemvula encane, izinga layo lokushisa liphansi kakhulu nolwandle luba yiqhwa.
Isici sezomnotho soLwandle lwase-Okhotsk
Njengoba sishilo ekuqaleni kwendatshana, lolu lwandle alubalulekile nje kuphela ngokombono wezinto eziphilayo kodwa futhi nasendaweni yokubuka yezomnotho. Ake siqale sihlaziye izinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ezitholakala kulolu lwandle. Ingenye yezilwandle ezikhiqiza kakhulu emhlabeni. Futhi ukuthi inomsele wamanzi osiza ukukhipha amanzi amakhulu inani lamanzi alayishwe izakhamzimba ezithanda ukwanda kwempilo. Ngaphezu kwalokho, inokushintshana okukhulu kwemisinga yasolwandle kanye nokukhuphuka kwamanzi asolwandle ajulile alayishwe izakhamzimba futhi ayizici ezinhle ekuthuthukiseni ukuhlukahluka kwemvelo.
Izimbali zimelelwa ikakhulukazi yizinhlobo eziningi ze-algae. Lawa ma-algae anesithakazelo esihle kwezentengiso ngemikhiqizo eminingi. Ezilwaneni zalo, izimbaza, izinkalankala, ama-urchins asolwandle, phakathi kokunye, avelele. Ngokuqondene nezinhlobo zezinhlanzi ezibaluleke kakhulu kwezohwebo, sine-herring, pollock, cod, salmon, njll. Yize incane ngokulingana, uLwandle lwase-Okhotsk luphinde luhlale nezinye izilwane ezincelisayo zasolwandle, kufaka phakathi imikhomo, izingonyama zolwandle nezimvu zamanzi.
Ukubanjwa kokudoba kubalulekile emnothweni waseRussia. Ukuthunyelwa okujwayelekile okuhlanganisa amachweba asempumalanga yeRussia kwenzeka oLwandle lwase-Okhotsk. Iqhwa lasebusika elimboza lolu lwandle oluba yiqhwa liyisithiyo esiminyaminya sezilwandle, kuyilapho ehlobo kuyinkungu. Yize inentshisekelo enkulu kwezentengiselwano, kuyingozi ukuhamba kulezi zindawo. Enye yezingozi esingaba nayo lapho sihamba kulolu lwandle yimisinga enamandla namatshe acwilisiwe. Zingaholela ekuphukeni kwemikhumbi nasezingozini ezingafuneki kakhulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngoLwandle lwase-Okhotsk nezimpawu zalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Ulwandle Okhotsk